Abangane baseJalimane, baseJalimane abahlala eCologne sicela basize ... - IGERMAN
Sicela usize abangani bakho abahlala eCologne ...
« : Mashi 10, 2016, 03: 30: 05 pm »
Re: Abangane abahlala eCologne ngicela basize ...
« Phendula #1: Mashi 10, 2016, 03: 40: 53 pm »
Ngabe ucabange ukuya esifundweni ngakho-ke
Okufanele Ukwenze Ukuze Uthole Ilayisensi Yokushayela YaseJalimane Nencwadi Yokusebenzela yaseTurkey
Amadokhumenti adingekayo ku-Family Association Visa
Chofoza ukulanda Ifomu Lokufaka Umndeni.
Chofoza lapha ukuze uthole ifomu lokugcwalisa isicelo (SAMPLE).
Ukuhlanganiswa Komndeni (A1) Ulwazi Oluvamile lwe-Sinavi
Amadokhumenti acelwe eJalimane
Ngaphambi wenza imoto yakho ukuze Turkey kanye izinyathelo ezidingekile zithathiwe ukulandela
Amadokhumenti acele i-Family Association Visa
Amadokhumenti adingekayo kwiVisa yezokuvakasha
Chofoza lapha ukuze uthole intengo engabizi
Isicelo se-Visa kanye nezinqubo zomshado
« Phendula #2: Mashi 10, 2016, 04: 07: 24 pm »
Cha mfowethu ngizoya esifundweni, kodwa kunezinto ezincane ezinjengalezi, ake sibheke ngaphambi noma ngemuva kwesikhathi sesifundo njengaye.
« Phendula #3: Mashi 10, 2016, 04: 23: 00 pm »
Uthi i-minijop, awusacabangi ngomsebenzi, hamba uyohlala phansi, ubambe indlu yakho, uyithenge, lapho-ke uzoqala izifundo, qiniseka ukuthi kuzovela
Kucashunwe ku: kncinar - Mashi 10, 2016 ngo-04: 07: 24 pm
I-Voll Mitglied 1
« Phendula #4: Mashi 12, 2016, 02:04:10 am »
Sawubona, okokuqala nje, angiqondi ukuthi kungani ufuna ukusebenza, uma umlingani wakho engenayo imali eyanele, ungathola usizo kuhulumeni, lapho-ke awudingi ukusebenza kulungile akuyona into embi sebenza, kungcono ukuzitholela imali yakho esikhundleni sokuthola usizo, kepha ukusebenza kuzothinta ukufunda kwakho kwesiJalimane futhi kufanele ubhekane nomsebenzi ozothatha isikhathi sakho ukufunda isiJalimane. Qedela ukufunda isiJalimane, khona-ke uzosebenzela inkambo yami lapho bekungabantu abathathu abasebenza esifundweni ebengifunda kuso, bebesezingeni elibi kakhulu lapho isifundo sesiphelile.Ukufunda kuthinta kakhulu kuba lula kuwe ukuthi ugxile entweni eyodwa kuphela bese uyifeza.
Kodwa-ke, nami ngihlala ezigqilazweni. Uma kukhona ongakucela, ngizokusiza noma nini lapho ngikwazi.
« Phendula #5: Ephreli 04, 2016, 12:02:12 am »
Mnumzane, nami ngihlala eCologne. Ungacabangi ngokusebenza ngokushesha nje lapho ufika, uzoba nomsebenzi omningi wephepha, bazobiza u-amt, bazokhuluma nawe, bazothi baya esifundweni somuntu ngamunye nawe. Kuzothatha okungenani izinyanga eziyisi-6 ukujwayela, futhi kungafaneleka uma ngithi sekuyiminyaka emi-2 ngifikile futhi angibanga nekhono ngokuphelele. Ngiye esifundweni solimi ekuqaleni ngiphase isivivinyo sokuqala se-b1, uma ngikhuluma iqiniso, bekuyinto ethokozisayo ngaphandle kokukhuluma, ngenze i-44 kusuka ku-19 schreiben kusuka ku-lesen, i-64 evela ku-sprechen bekufana nehlaya Gwema ukucindezeleka, phuma ungene kwimvelo ngangokunokwenzeka. Ucele umsebenzi, ngakusho okunye okunye Ungawuthola umsebenzi eHal eCologne, uma ufuna ukusebenza nenkampani elula kunazo zonke noma enye yezinkampani ezihlanza osonkontileka.
« Phendula #6: Novemba 27, 2017, 01:04:24 am »
Kucashunwe ku: kncinar - Mashi 10, 2016 ngo-03: 30: 05 pm
Sawubona, uma umndeni wakwa-Almancax unenhlanhla ngemuva kwezinsuku ezimbalwa, ngizoqala ukuhlala kwisigqila eJalimane. Lapho i-visa isiphelile, ukukhathazeka kokuthola umsebenzi sekuqalile.
Okokuqala, uNkulunkulu akusize, singene endleleni, kepha ake sibone ukuthi imiphumela izoba yini.
Hamba Uyomfundisa Impilo Yolwandle Ayidabuki Lapho Imikhumbi Icwila.